Nkowa di nkpa nke akwukwo "Obodo na nkita" site na Mario Vargas Llosa | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mario Vargas Llosa, onye edemede Peruvian na nnukwu ọnụ ọgụgụ na akụkọ Latin America maka nnukwu nyocha ya banyere usoro akụkọ na mgbagwoju anya ha na ụwa akụkọ, bipụtara ọrụ ya "Obodo nkịta" na 1962. Nke a bụ ọrụ onye edemede mbụ wee bụrụ onye mbụ na-edu ndị otu akpọrọ bulie elu.
En "Obodo na nkịta", na-ekwupụta site na nkatọ nke machismo na ime ihe ike n'ụlọ akwụkwọ ndị agha na Lima, nkatọ nke ndị obodo Peruvian.
Maka ndị gị na amaghị ihe ana-akpọ oku ọganihu akwụkwọ, kwekọrọ na nnukwu ihe ịga nke ọma nke Latin American akwụkwọ nke malitere na mbido Afọ iri isii ihe dị ka. N'ime ọganihu a, ọrụ ụfọdụ pụtara na-egosi nkwụsị na ụdị ọdịnala nke akụkọ ahụ, ma n'otu oge ahụ, mere aha ndị dere ha ama ama n'ụwa niile. Otu n'ime ha bụ akwụkwọ akụkọ nke ogo mmadụ G. García Márquez, Carlos Fuentes na Mario Vargas Llosa n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Ndị a na-asụ asụsụ sara mbara na nke sara mbara karịa ka ọ dị kemgbe ahụ.
1 "Obodo na nkịta," gịnị ka ọ bụ?
1.1 Mmiri nkịta
1.2 Ihe omume n'ụlọ akwụkwọ
1.2.1 Izu ohi ule onwu na onwu nke cadet
1.2.2 Ihe akaebe Alberto na itinye aka nke Jaguar
1.3 Ndụ mgbe ụlọ akwụkwọ gụsịrị
"Obodo na nkịta," gịnị ka ọ bụ?
Obodo na Nkịta ...
"Obodo na nkịta", bipụtara na 1962, na-akọ banyere oke obi ọjọọ nke otu ìgwè ụmụ akwụkwọ na-eto eto sitere na ụlọ akwụkwọ ndị agha na Lima. Site na akụrụngwa akụkọ dị iche iche, nke bụ ihe ọhụụ maka oge ahụ, Vargas Llosa na-ekpughe nsonaazụ nke agụmakwụkwọ agha a ghọtahiere ma katọọ nrụrụ aka nke ụwa na ime ihe ike ya ugbu a.
Ọzọ, anyị ga-achikota nkenke oge (ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgụ ya, ọ ka mma ka ị hapụ ịgụ isiokwu a ebe a), ụfọdụ akụkụ nke mebere ya.
Militarylọ akwụkwọ ndị agha bụ ụlọ ọrụ nke ụmụ nwoke dị iche iche na-enweta iji mụọ afọ atọ gara aga nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị. N'ime ya, a na-etinye ụmụ akwụkwọ na gburugburu ebe ime ihe ike na nsogbu. Ndị klas nke anọ na-eme ememe dị nro maka ndị bịara ọhụrụ n'afọ ahụ. Na nzaghachi nke a, ụfọdụ ndị na-eto eto hiwere otu a na-akpọ "Circle", otu nke kpebiri ịbọ ọbọ n'ahụ ụmụ klas nke anọ. Ọ bụ Jaguar na-eduzi ya, nwata nwoke na-eme ihe ike nke na-ezube ọgụ dị egwu megide ndị iro ya na onye na-aghọ onye isi ụmụ nwoke ndị ọzọ ọ na-akpalite ime ihe ike. Ricardo Arana, onye naanị ya na-anọrọ n'akụkụ, na-akwagide ya kpamkpam na nke a ọ na-enweta oke iti ihe. Site n'oge a gaa n'ihu na ndị ọzọ nke ndị cadets na-awakpo ya ma na-akparị ya.
Ihe omume n'ụlọ akwụkwọ
Izu ohi ule onwu na onwu nke cadet
Cava, otu n'ime ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ahụ, zuru ule ule onwu site na ntuziaka Jaguar. Ndị ọchịchị na-achọpụta mpụ ahụ n'agbanyeghị na ha enweghị ike ịmata onye mere mpụ ahụ. Nke a bụ ihe kpatara ha ji ekpebi imegwara ndị niile na-eto eto wee mechie ha ma debe ha n'ụlọ akwụkwọ ruo mgbe ebighị ebi. Mgbe izu ole na ole gasịrị, agwa a maara dị ka Slave katọrọ Cava n'ihu ndị isi ahụ wee chụpụ ya. Agbanyeghị, n'oge ụfọdụ ị na - emegharị ihe omume na - adịghị mma ... Kadet na - anata mgbọ si ebe ọzọ wee nwụọ ...
Ihe akaebe Alberto na itinye aka nke Jaguar
Alberto, nke a na-akpọ uri, nwere ekele maka Ohu ahụ (Ricardo Arana). Maka nke a, ọ katọrọ omume adịghị mma nke ụmụ akwụkwọ ibe ya ma bo Jaguar na Lieutenant Gamboa ebubo. Ọ na-enyo enyo na ọ bụ ogbu mmadụ Arana, mana ọ nweghị akaebe zuru oke. Ntinye aka nke onye ọka iwu agaghị arụ ọrụ ọ bụla; ndị isi ya jụrụ ime nchọpụta iji zere mkparị a na-emebi aha ụlọ ọrụ ahụ. Ha na-eyi Alberto egwu iji mechie ọnụ ya wee nye iwu ịnyefe onye isi. Ndị cadets, bụ ndị a tara ahụhụ maka ozi nke Poet nyere, kwenyere na Jaguar nyere ha n'oge iwe. E mesịa ọ na-enweta nlelị na mmechuihu nke ndị ibe ya ma nwee owu ọmụma na nke mbụ ya.
Ndụ mgbe ụlọ akwụkwọ gụsịrị
Na Jaguar, onye nwere nkụda mmụọ site na omume nke ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ, kwupụtara Gamboa na ọ bụ ya mere mpụ ahụ. O chegharịrị, dịrị njikere ịtọgbọ, dịkwa njikere ịta ihe ga-esi na ya pụta. Mana Gamboa mara na o nweghi onye ulo akwukwo a nwere mmasi nuru nkwuputa ya. Ọ na-agba gị ume ịmụta ihe site na mmejọ gị ma mezie ndụ gị. Jaguar mechara tinye aka na ọha mmadụ ma lụọ.
Akwụkwọ ndị ị ga-agụ tupu ịnwụ, ka Vargas Llosa si kwuo
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Nchịkọta dị mkpirikpi nke akwụkwọ «Obodo na nkịta» nke Mario Vargas Llosa dere
O doro anya na ọ bụ akwụkwọ mara mma. Achọrọ m inweta akwụkwọ ahụ, n'ihi na enwere m mmasị na isiokwu ahụ
Zaghachi Maria Ana
Biko onye bu onye dere ihe a nke na-eji machismo eme ihe dika okwu nke ime ihe ike, olee ihe ojoo na mmegbu nke okwu a ugbu a, olee ihe nzuzu n'oge a 2018, ị ga-eji ime ihe ike, nke na-enweghi okike na machismo nke na-adighi site na ime ihe ike niile na echiche nwanyi na-enweghi.
Ekele m na sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo na m na na na a ... achikota m ...
Ndewo ndị enyi, ndị ọrụ ịntanetị, ekele na nsutu wapos
Diego si Dora dijo
agara m guzmen y gomez wee nweta dollar dollar burrito mana nwanyị ahụ ekwughi okwu bekee yabụ m kwuru biko nye m nwa bebi ahụ na-atọ m ụtọ wee gaa n'ihu na-akwa iko maka ụlọ ọrụ ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na mexican. obere oge mgbe m kụsịrị ya, o nye m suk suk, na-etinyekwa ihendori n'efu. ya ewere ya n'inyinya ibu ya tupu ya acho ya na tortilla. mgbe ahụ, a laghachiri ya na kenya, m pụtara venezuela ebe nne nne ya jiri arepa de crap na-eche ya. arepa jupụtara na nsị nwoke na nwanyị, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ma mechaa na tia marias akwụkwọ nri ebe a tụrụ aro ka mario testino sie nri na igwe onyonyo, ebe ọ bara akwụkwọ, akwụkwọ ahụ adịkwaghị meghere n'ihi mgbapu ahụ. ọ gaziri ahịa nweta ngwaahịa maka chille con carne ya na ọghọm zutara anụ ehi ndị mmekọ nwoke na nwoke. nke a na-agbanye na chlamyedia. Diego wee gwa mario, ọ dị m nwute mana ọ dị ka nwoke gị nwere mmasị nwoke, yabụ anyị ga-ewepụ nwoke idina nwoke site na gị site na ị nye gị ụfọdụ nne na nna ochie m ochie nke ejiri ịhụnanya na mmetụta ịhụnanya sie.
Nzaghachi diego site na dora
Ọrụ a masịrị m nke ukwuu m gụrụ ya ugboro 3
Zaghachi Kamila Avila
Jaguar mechara mechaa mụta ihe site na mmejọ ya ma gbanwee ndụ ya, mara ihe niile o mere ma lụọ.
Zaghachi NICOLLE GONZALES RAMOS
Aghụghọ iji họrọ aha ọma maka ndị edemede gị